Hooyo iyo Carruurteeda oo ku dhintay derbi kusoo dumay | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Hooyo iyo Shan Carruur ah oo ay dhashay ayaa kamid ah todobo qof oo ku geeriyootay derbi kusoo dumay Kaam barakacayaal duleedka Muqdisho.
Waxay ahayd dhacdo xanuun badan oo laga soo wariyay degaanka Garasbaaley, gaar ahaan Jaamacadda Shabeelle halkaasoo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha gobolka Shabeellaha Hoose.
Afar qof oo kale ayaa ku dhaawacmay, kuwaasoo la dhigay Isbitaalka Madiina. Todobada ruux ee geeriyootey waxaa ku jira canug yar oo dhawaan walaalkiisa Koronto ay dishay.
Xili afurka lagu jiray Maqribkii ayuu derbi wayn oo mudo dhisnaa ayaa kusoo dumay dadkan barakacayaasha ah, waxaana la rumeysan yahay in roobabka xooggan ee ka da'aya Caasimadda Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen soo dumida dhismaha.
Maalintii Jimcaha, Xaafada Buula-Xuubey ee degmada Wadajir ayaa waxaa ku dhimatay 9 qof, oo shan kamid ah ahaayeen Carruur isku qoys ah, waxaana dilay biyo guriga uga galay, sida uu xaqiijiyay aabahooda oo ka badbaaday musiibaddan.